यो डराउनुपर्ने समाचार होईन – नारायण शर्मा : NepalChurch.com
नेपाली ख्रीष्टियन महासंघद्वारा आयोजित ख्रीष्टमस शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा विशप डा. नारायण शर्माले बोल्नुभएको क्रिसमस सन्देश जस्ताको तस्तै:
अडियो रेकर्डमा सुनेर उहाँले बोल्नुभएको शब्दहरुपनि जस्ताको तस्तै लेखेर पोष्ट गरेको छु ! तपाईहरुलाइ शब्द बुझ्न सजिलो होस् भनेर…
1 ती दिनमा कैसर अगस्‍टसले तिनको सारा साम्राज्‍यमा जनगणना लिनू भन्‍ने हुकुम जारी गरे।
2 कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्‍टको जनगणना थियो।
3 सबै जना नाउँ दर्ता गराउन आफ्‍नो-आफ्‍नो सहर गए।
4 योसेफ पनि गालीलको नासरतबाट यहूदियाको बेथलेहेम भन्‍ने दाऊदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाऊदका कुटुम्‍ब र वंशका थिए।
5 नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्‌।
6 तिनीहरू त्‍यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्‍माउने बेला आयो।
7 तिनले आफ्‍नो जेठो छोरो जन्‍माइन्‌ र उहाँलाई लुगाले बेह्रेर डूँड़मा राखिन्‌, किनकि तिनीहरूका निम्‍ति पौवामा ठाउँ थिएन।
8 त्‍यही इलाकामा गोठालाहरू थिए, जसले चउरमा बसेर राती आफ्‍नो बगालको रखवाली गर्थे।
9 प्रभुका एक जना स्‍वर्गदूत तिनीहरूकहाँ देखा परे, र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्‍क्‍यो, अनि तिनीहरू साह्रै डराए।
10 तब स्‍वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, “नडराओ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बड़ो आनन्‍दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूका निम्‍ति हुनेछ।
11 आज दाऊदको सहरमा तिमीहरूका निम्‍ति एक जना मुक्तिदाताको जन्‍म भएको छ, जो ख्रीष्‍ट प्रभु हुनुहुन्‍छ।
12 तिमीहरूलाई चिन्‍हचाहिँ यो हुन्‍छ: तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेह्रेको र डूँड़मा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ।”
13 तब एक्‍कासि ती स्‍वर्गदूतसँग स्‍वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्‍यो। परमेश्‍वरको स्‍तुति गर्दै, तिनीहरूले भने,
14 “सर्वोच्‍चमा परमेश्‍वरलाई महिमा, र पृथ्‍वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्‍न हुनुहुन्‍छ, तिनीहरूलाई शान्‍ति!”
यो परिको कथा होईन । ईतिहासको पाना हो ।
आजको दिन सारा संसारभरी जुन देशमा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक र अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ, त्यो देशमा आजको यो समय यस डुंडमा, गोठमा जन्मेको बालकको जयजयकार र आराधना गरिरहेका छन् , र गरिरहेका छन् । र त्यहि रुपमा हाम्रा राज्यका विशिष्ट पाहुनहरु संगसंगै हामी नेपालका केही विश्वासीगणहरु मिलेर यसरी प्रभु येशूको जन्मोत्सव ख्रीष्टमसको अवसरमा उहाँलाई महिमा र आराधना गर्न पाएकोमा यो हाम्रो राष्टको निम्ति सम्मानको कुरा हो । सारा संसारको निम्ति यो एउटा असल सन्देश हो कि नेपालले महान लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा भएर प्रत्येक नागरिकलाई उसको मौलिक हक र सम्मान दिनको निम्ति हामी अग्रसरतामा अगाडी बढिरहेका छौ भन्ने सन्देशलाइ सम्प्रेषण गरेको छ ।
परमेश्वर देहधारी भइ हाम्रो माझमा आउनुभयो । ख्रीष्टमस यहि हो । परमेश्वर मान्छेहरूको माझमा आउनुभयो अनि यो कथा यति सरल छ, अति सत्य छ । अचम्मको रहस्य पत्ता लगाउनुपर्ने कुरा र यसको अर्थ खोल्नुपर्ने कुरा केही देखिदैन । जुन परमेश्वरले स्वर्ग पृथ्वी रच्नुभयो त्यहि परमेश्वर जब मानव रुप लिएर देहधारी भएर धर्तिमा आउनुभयो जसलाई जन्मनुको निम्ति संसारमा कुनै ठाउँ नै थिएन ।
धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, त्यहाँ पौवामा कुनै ठाउँ नै थिएन । यो इतिहासको पाना आज पनि दोहोरिन्छ । प्रभु येशु घरिघरी त जन्मनुहुन्न तर उहाँको जन्म प्रत्येक मानव जातिको हृदयभित्र हुन्छ । तर दुख लाग्दो कुरा यही छ कि त्यस समय जसरी बेथलेहेममा कुनै ठाँउ नै थिएन, त्यस्तै आज त्यही ईश्वरलाई जन्म दिनको निम्ति धेरै मनिसको हृदयमा ठाउँ छैन ।
मानिस व्यस्त भएको छ । मानिसको व्यस्तता साह्रै भएको छ । मानिसको हृदय एकदमै भरिएको छ ।
अर्को अचम्मको र अलौकिक कुरा के छ भने उहाँ महान इश्वर जसले सारा पृथ्वी बनाउनुभयो उहाँलाई जन्मनुको निम्ति ठाउँ भएन । यस्तो ठाउँ उहाँले पाउनुभयो जो हाम्रो समाजमा सबभन्दा गन्हाउने र एकदमै नराम्रो ठाउँ जसलाई हामी गोठ भन्छौ । जसको भकारी फालिन्छ । एकदमै गन्हाउछ । त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो मुक्तिदाताको जन्म भयो; यसको पछाडि सन्देश मानव जातिलाइ के छ ? सन्देश यहि नै हो, आज पनि यो संसारमा सबैभन्दा बढी गन्हाउने ठाँउ गाइको गोठ होइन तर मान्छेमा हृदय हो । जसको भित्र पाप र अधर्म लुकेर रहेको छ ।
यदि आजभन्दा २०१४ वर्ष अगाडी उहाँ त्यस गन्हाउने गोठमा जन्म लिनु भएको थियो भने आजपनि वहाँ मान्छेको गन्हाउने त्यो पापी हृदयमा जन्म लिन चाहनुहुन्छ । ख्रीष्टमस सन्देश यहि हो ।
परमेश्वर देहधारी हुनुभएर आउनुभयो । ख्रीष्टमसको सन्देश प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने सन्देश होइन । बाइबलले भन्दछ परमेश्वर सधै एकसमान हुनुहुन्छ । जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ , जो हुनेवाला हुनुहुन्छ उहाँ कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न । हामी परिवर्तन हुन्छौं । हाम्रो विचार परिवर्तन हुन्छ । हामी बदलिन्छौ तर ख्रीष्टमसको सन्देश प्रत्येक वर्ष एउटै हुन्छ । प्रत्येक वर्ष हुन्छ, किनभने यो सन्देश यहि हो परमेश्वर देहधारी भएर मानिसजातिको निम्ति यस धर्तिमा आउनुभयो ।
यो अलौकिक घटना हो । यो अलौकिक घटना हो । यो एउटा चमत्कार हो । परमेश्वरले मानवजातिलाई प्रेम गर्नुभयो त्यो प्रेमलाई प्रकट गर्न उहाँ आफै मानिस बनेर हाम्रो माझमा आउनुभयो । कति अचम्मका कुरा यस संसारका सृजनहार परमेश्वर मान्छे भएर यस धर्तिमा आउनुभयो । उहाँको जन्मको सन्देश पत्रकार सम्मेलन गराएर गराइएन । त्यहाँ राजदरबाहरु पनि थुप्रै थिए त्यहाँ गएर उहाँको जन्मको सन्देश पनि सुनाइएन ।
तर आज संसारमा सबैभन्दा बढी शोषित, पीडित, एउटा बर्ग छ । जसको आजसम्म नेपाल सरकारमा कुनै संघ र संगठन दर्ता भएको छैन, र त्यो बर्गको नाम हो ‘गोठालो’ । अनि यहाँसम्म कि हाम्रो नेपाली भाषामा कसैलाइ गाली गर्नुपर्दा हामी भन्दछौ तँ-गोठालो ।
परमेश्वर मुक्तिदाताको सन्देश त्यही सबैभन्दा अपहेलित, त्यही सबैभन्दा तुच्छ गनिएका एउटा बर्ग जसको कुनै अधिकार छैन, जसको अस्तित्वको कुनै अर्थ छैन त्यस्ता मानिसहरुकहाँ स्वर्गदुतले यो सन्देश लिएर आउँदछन् र भन्दछन् नडराओ किनभने हेर म तिमीहरुलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउछु, जुन सबै मानिसहरुको निम्ति हुनेछ ।
आज पनि मुक्तिदातको जन्मको सन्देश महान व्यक्तिहरुको निम्ति होइन। निश्चय हाम्रो समाजमा जसको कुनै अस्तित्व छैन, जो अन्धकारमा, एक्लोपनमा, पापमा डुलिरहेका छन् ती मानिसहरुकहाँ आज पनि ख्रीष्टमसको अवसरमा स्वर्गदुतहरुले यहि सन्देश लिएर आएकाछन् – ‘नडराओ’ ।
प्राण मान्छेको निम्ति प्यारो छ । प्रत्येक मानिसको जीवनमा डर व्यापक हुन्छ । यो डर परमेश्वरको बरदान होइन । परमेश्वरको बरदान त प्रेम हो, आशा हो, भरोसा हो, विश्वास हो । तर दुष्ट सैतानले ल्याएको बरदान मानवजातिको निम्ति त्यो हो डर । शंका र अविश्वास यो ३ वटा बरदान दुष्ट शैतानले मान्छेलाइ उपहारको रुपमा दिएको छ । र यहि उपहार खोसाखोस गरेर मानिसहरु जुधिरहेकाछन् । कुदिरहेकछन् । तर आज यस ख्रीष्टमसको अवसरमा म तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु परमेश्वर यस धर्तिमा आउनुभयो र उहाँको जन्मको सन्देश संगसंगै एउटा आज्ञा पनि आएको छ-‘नडराओ’ ।
मानव जातिलाई डरबाट उन्मुक्त गर्नको निम्ति, बन्धन्बाट उन्मुक्त गर्नको लागि, पापबाट उन्मुक्त गर्नको निम्ति, शोषणबाट उन्मुक्त गर्नको निम्ति, बिनाअर्थको जीवनबाट उन्मुक्त गर्नका निम्ति प्रभु येशु यस धर्तिमा आउनुभयो ।
नडराओ, किनभने बडो आनन्दको समाचार म तिमिहरुलाई सुनाउँदछु । यो ख्रीष्टमसको समाचार चाहिं आनन्दको समाचार हो । यो डराउनुपर्ने समाचार होईन । म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई कि आज यस आनन्दको समचारलाई हामीले उत्सवको रुपमा मनाइरहेका छौँ । उहाँ प्रभु येशु हुनुहुन्छ ।
यो सन्देश सबै मानिसहरुको निम्ति हुनेछ ।
परमेश्वरलाई कसैले आफ्नो राष्ट्रमा, सिमानाभित्र बाधेर राख्छ भने उहाँ इश्वर नै होइन । यदि इश्वरलाई कसैले आफ्नो कुलभित्र मात्रै बाधेर राख्छ भने ती इश्वर नै होइनन् । इश्वर भनेका सबैका निम्ति हुन् । यहि सन्देश स्वर्गदुतले लिएर आए: “जो मुक्तिदाता जन्मनुभएको छ उहाँ कुनै राष्ट्रको मुक्तिदाता होइनन् । उनी जातिको मुक्तिदाता होइनन् । उनी समुहको मुक्तिदाता होइनन् । उनी सिमानामा बाधेर राख्ने मुक्तिदाता होइनन् । उहाँ सारा संसारभरिको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ । आमिन ।
यहि सन्देश आजभन्दा ४०० वर्षअगाडी, पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडी केही मानिसहरुले यो देशमा बोकेर आएका थिए । उनीहरुले यो देशको राजा र शासकहरुबाट सम्मान पाएका थिए । सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त भएका थिए । यो सन्देश नेपालका मानिसहरुका निम्ति पनि थियो यसैकारण यो सन्देश तपाईंकहाँ मकहाँ आउनसक्यो । यो कुनै मानिसले छोपेर, कुनै मानिसले च्यातेर, कोहि मान्छेले जलाएर , कोहि मान्छेले नियम लगाएर यो बाँधिने कुरा हुँदै होइन । किनभने स्वर्गदुतले भनेका छन् : यो सबै मान्छेको लागि हुनेछ । यो सबै मानिसको लागि हुनेछ, यसलाइ कसैले पनि रोक्ने छैन ।
प्रभु येशुले भन्नुभयो हेर म ढोकामा उभिएर घच्घच्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म आउनेछु ।
यो क्रिसमस आखिर के हो ?
एउटा रहस्य हो, कि परमेश्वर देहधारी भएर हामीजस्तो मान्छेको लागी आउनुभयो ।
जो अन्धकारमा हामी हिडडुल गरिरहेका छौं । कुविचार र दुष्टतालाई बोकेर हामी बाचिरहेका छौं । हाम्रो हृदयमा उहाँका कुराहरुले, उहाँको जीवनले, उहाँको क्रुसको मरणले हाम्रो जीवनलाई घरीघरी भालाले घोच्छ । हुनत उहाँको हातमा तरवार पनि छैन । ढाल पनि छैन । भाला पनि छैन तर उहाँले बोल्नुभएका वचनहरु, उहाँले बोल्नुभएका सन्देशहरुले हाम्रो जीवनको अधर्मलाई चाहिँ छल्दछ । हाम्रो जीवनमा भएको पापलाई चाहिं यसले ठोक्दछ । यसले इन्कार गर्दछ । यसले मार्दछ र हामीलाई एउटा नयाँ जीवन दिएर अगाडी बढ्नलाई सहायता गर्दछ ।
जब हामी देश परिवर्तन गर्न लागेका छौ त्यसभन्दा अगाडी हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । मान्छेले आफ्नो परिवर्तन आफै गर्न सक्दैन किनभने मान्छेले मान्छेलाई बनाएको होइन , मान्छेलाई इश्वरले बनाउनुभएको हो । त्यसकारण उहाँले मात्र तपाईं र मलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । मान्छेलाई इश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ । मानिस परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन भएको मानिसले मात्र समाजलाई परिवर्तन गर्नसक्छ ।
परिवर्तन भएको मानिसले मात्र समाजलाई परिवर्तन गर्नसक्छ र परिवर्तित भएको समाजले मात्र राष्ट्रलाई निर्माण गर्नसक्छ ।
आज यो सुन्दर अवसर ख्रीष्टमस ।
परमेश्वर आफै देहधारी भएर हाम्रो माझमा आउनुभएको हो । कति सुन्दर हामीलाई सम्झनाको स्मरण गराउनुहुन्छ कि उहाँ नम्रतामा, उहाँ एउटा दीन भएर, आफै देहधारी भएर मानिसको माझमा मानव जीवनको उद्धारको निम्ति आउनुभयो ।
आउनुहोस् यहि सन्देशलाई हाम्रो हृदयमा बोकेर हामी पनि हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरि एउटा अर्थपूर्ण र उद्देश्यपूर्ण जीवनलाई बोकेर, हाम्रो समाजलाई रूपान्तरित गर्नको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रको विकास र राष्ट्रलाई विश्वमा पहिचान गर्नका निम्ति, हामी उहाँको आशीर्वाद बोकेर हामी अगाडी बढ्नसकौं । हाम्रो यो पनि कर्तव्य छ, यस समय हाम्रो राष्ट्रमा इश्वरले शासकका रुपमा राख्नुभएका हाम्रा राष्ट्रसेवकहरुका निम्ति प्रार्थना गरौँ । उहाँहरुका निम्ति परमेश्वरको आशीर्वाद र ज्ञानबुद्धि उहाँहरूको जीवनमा निरन्तर रहोस् र हाम्रो देश बिश्वमा एउटा अलौकिक पहिचान भएको बिशाल सुन्दर देशको रुपमा चिनिनसकोस् । यसैमा परमेश्वरको महिमा हुनेछ । आमेन ।
नोट: यो क्रिसमस प्रत्यक्ष प्रशारण ४ वटा राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूबाट गरिएको थियो ।
आदानप्रदान विशेष कार्यक्रममा पूर्वसभामुख तथा मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुंगाना, विश्व हिन्दु महासंघ अध्यक्ष दामोदर गौतम, कांग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा हजारौँको संख्यामा विभिन्न मण्डलीहरुबाट बिश्वासिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
Category: Sermons, Sermons/Teachings, ख्रीष्टमस शुभकामना
« In Search of Christian Newars banished from Nepal 244 years ago
विश्वकै साहसिक यात्राको लागि लुक्ला विमानस्थल »